Amata Hotel & Resort chains in Myanmar, Hotels in Bagan, Ngapali Beach, Inle Lake
Amata - Next5Years Vision​
Awinka Hpa An
Awinka Pyin Oo Lwin
-92 rooms at Amata Ngapali
-122 rooms at Amata Bagan
-191 rooms at Amata Inle
-32 rooms at My Bagan Residence by Amata​
-Completion of IFC convertible debt financing agreement
-Completion of OTC Public Offering / Vendor sale
-Soft launch of Amata Andaman​
-Completion of2Awinka hotels @ Hpa-an and Pindaya
-Additional 20 rooms for Amata Andaman and 90 rooms for Amata Inle​
-Completion of another2Awinka hotels @ Kalaw and Pyin Oo Lwin
-Additional 10 rooms for Amata Andaman​
-Additional 10 rooms for Amata Andaman
-5th Awinka hotel in Mawlamyine​
Amata - Next 10 Years Vision
Amata Pindaya (Opening in Nov, 2019)
Amata Kalaw Hill (Opening in Nov, 2019)
Mt. Victoria Residence
Awinka: (Loikaw, Pyay, Kaw Thaung, Kyaingtong, Dawei)
Green Terrace Residence (Yangon)
Aviation (Seaplane & Helicopter)
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပုဂံ၊ ညောင်ရွှေနှင့် ကလောမြို့များတွင် အဆင့်မှီကားများဖြင့် Sightseeing Service များ ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။​
Online Travel Booking System​
ဟိုတယ်အခန်း၊ မီးပုံးပျံခရီးစဉ်၊ လေယာဉ်လက်မှတ်၊ Sightseeing များအား တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်သော Awinka Travel Website Online Sales Center.​
လက်ရှိအချိန်တွင် အမတဟိုတယ်များ၌ ဖွင့်လှစ်ထားလျက်ရှိပြီး ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် အခြားမြို့ကြီးများတွင် ဆက်လက်၍ Stand Alone Bar & Restaurant များ သီးခြားဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။​
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အချိန်များစွာပေးရသော သွားလာရန်ခက်ခဲသည့်နေရာများတွင် ရဟတ်ယာဉ်များ၊ ရေပေါ်သို့ဆင်းသက်နိုင်သည့် လေယာဉ်ပျံအမျိုးအစားများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရဟတ်ယာဉ်များအား အမေရိကန်နိုင်ငံ Bell Helicopter မှ Bell 505 အမျိုးအစား ရဟတ်ယာဉ်များအား၎င်း၊ Cessna Grand Caravan အမျိုးအစား Sea Plane များဖြင့်၎င်း ပြေးဆွဲရန်စီစဉ်ထားရှိပြီး၊ လေကြောင်းဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ ဆက်လက်ခွင့်ပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။​
Hotels & Resorts Budget Hotels​
အဝင်္က ဟိုတယ်များတွင် Standard အခန်း (၅၀) မှ (၈၀) ထိ ပါရှိပြီး၊ ကန့်သတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုသာပေးမည့် တန်ဖိုးနည်းဟိုတယ်များဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းအား ၂ နှစ် အတွင်း ပြီးစီးအောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
My Hpa-An Residence by Amata သည် မြေဧကအကျယ်အဝန်း (၁၂)ဧကရှိပြီး ဇွဲကပင်တောင်ခြေတွင် တည်ရှိပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော စနစ်၊ တည်ဆောက်မှုပစ္စည်းများ အသုံးပြုထားကာ ခေတ်မှီဆန်းသစ်မှုနှင့် အပန်းဖြေနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ Villa (၅၀)ခန်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အခန်း (၂၀)ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေကူးကန်၊ Meeting Room, Restaurant, Bar, Spa တို့ ပါရှိကာ Boutique Style ဟိုတယ်တစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။​
Opening in November, 2018​
Mt. Victoria Residence by Amata
Mt. Victoria Residence သည် ချင်းပြည်နယ် ဝိတိုရိယတောင်ပေါ်သွား ကားလမ်းဘေးတွင်တည်ရှိကာ မြေဧက (၈)ဧကကျယ်ဝန်းပြီး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော စနစ်၊ တည်ဆောက်မှုပစ္စည်းများအသုံးပြု၍ Eco Resort အဖြစ် အပန်းဖြေနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ Villa (၄၀)ခန်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး Restaurant, Bar, Spa တို့ ပါရှိကာ Boutique Style ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။​
Hotels & Service Apartment
Amata Garden Resort, Pindaya
ပင်းတယမြို့၏အချက်အချာကျရာ ပင်းတယဂူအနီးရှိ မြေဧကအကျယ်အဝန်း (၆)ဧကကျော်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး၊ Villa အခန်းပေါင်း (၅၀)ခန်းနှင့် ရေကူးကန်၊ Restaurant, Bar, Spa တို့ပါရှိပြီးသော ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Amata Kalaw Hill Resort, Kalaw
ကလောမြို့၏အချက်အချာကျရာ ဘိုကုန်းရပ်ကွက်ရှိ မြေဧကအကျယ်အဝန်း (၄)ဧကကျော်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး၊ Villa (၂၀)ခန်းနှင့် Deluxe Room (၆၀)ခန်း၊ အခန်းပေါင်း (၈၀)ခန်းနှင့် Restaurant, Bar, Spa တို့ပါရှိသော ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။​
Green Terrance Residence by Amata
Green Terrance Residence သည် 1 Bedroom,2Bedroom,3Bedroom များ ပါရှိသော Service Apartment စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး၊ မင်္ဂလာဒုံ Country Club အတွင်းရှိ မြေဧက (၅)ဧကပေါ်တွင် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကာ အခန်းပေါင်း (၁၂၀)ခန်း ပါရှိမည်ဖြစ်ပြီး4star အဆင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။​
အစုရှယ်ယာရောင်းရငွေကို အသုံးပြုအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများ​